Welcome to Aayaha Nolosha » DOWLADDA SOOMAALIYA OO DIYAARISAY XEER QOYS OO SHAREECADA ISLAAMKA KA SOO HORJEEDA
DOWLADDA SOOMAALIYA OO DIYAARISAY XEER QOYS OO SHAREECADA ISLAAMKA KA SOO HORJEEDA
October 19, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Xeer qoys oo la sheegay in ay dhawaan ay diyaarisay dowladda Soomaaliya ayaa muran xoog leh ka dhex abuuray bulshada Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadashay.
Sharcigaas oo ay horay u saxiixday xukuumadda federaalka ee Ra’iisul wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa la qorsheynayaa in la horgeeyo Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo ka doodi doona kadibna go’aan ka gaari doona ansixintiisa.
Haddii baarlamaanka lagu meel mariyo sharcigaas, waxaa u harsanaan doona inuu madaxweynaha qalinka ku duugo, si loo dhaqan galiyo.
Arrimaha ugu waaweyn ee ay doodda ka taagan tahay waxaa ka mid ah da’da qaan gaarka oo culumadu ay aaminsan yihiin inuu sharcigaasi ku micneeyay si ka duwan sida ay qabto shareecada Islaamka.
Da’da qaan gaarka ee shareecada islaamka caddeysay ayaa ah 15 sano, halka sharciga jinsiguna uu dhigayo inay tahay 18 sano, iyadoo sidaas si la mid ah Dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya uu qabo in da’da qaan gaarka ay tahay 18 sano.
Culumaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan qodobbo ku jira hindise sharciyeedkaas oo ay ku qeexeen mid meel uga dhacaya Kitaabka Quraanka iyo Sunnada Nabi Muxammad (NNKH)
Waxaa shalay bayaan hor leh laga soo saaray shir ay qaar ka mid ah culumaa’udiinka Soomaaliyeed ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo ay si weyn ugu dhaliileen sharciga cusub ee jinsiga oo ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha u gudbisay Golaha wasiirrada, oo qalinka ku duugay una sii gudbiyay Golaha Baarlamaanka.
Qormada bayaanka ayaa waxaa warbaahinta u soo koobay Sheekh Cabdiqaadir Yuusuf: “Hindise sharciyeedka ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaankan ee sugaya in Ia ansixiyo , wuxuu si toos ah uga hor imaanayaa shareecada islaamka ee ay umadda Soomaaliyeed dhammaantood aaminsanyihiin”.
“Wuxuu uga hor imaanayaa dhaqanka suuban ee islaamka arrimo dhowr ah, sida inuu weerarayo guurkii Rasuulkeenna Muxammad (NNKH), kuna tilmaamayaa xadgudub.
“Qof kasta waxa uu galayaa fal-dambiyeed guursi carruur ah, haddii uu si ula kac ah u guursado carruur aan qaan gaar ahayn”.
“Qof kasta oo gala faldamiyeedka ku xusan qodobkan waxaa lagu xukumayaa ciqaab xabsi oo aan ka yareyn 10 sano, kana badneyd 15 sano”.
Qodobbada kale ee doodda culus ka dhex abuuray bulshada waxaa ka mid ah sida uu xeerka jinsiga u maareeyay arrimaha la xiriira xadgudubyada galmada.
Sheekh Cabdiqaadir Yuusuf oo sii watay hadalkiisa ayaa yiri: “Qaanuunkan ma kala saarayo nikaax sharci ah iyo sineysi”.
Arrintan ayuu ku sharraxay qodob ka mid ah hindise sharciyeedka oo dhigaya in uu ciqaab muteysanayo qof walba oo galmo la sameeya qof kale oo aan raali ka ahayn.
“Sharcigan wuxuu kufsi u yaqaannaa qof kasta oo oggolaansho la’aan xiriir jinsi la sameeya qof kale, xitaa haddii ay yihiin labo ruux oo uu guur ka dhexeeyo” ayuu yiri.
Dhanka kale, Culumaa’udiinka ayaa sheegay in diiniyan ay bannaan tahay guursiga gabdhaha aan qaan gaarin, balse dhaqanka gogosha uu ku xiran yahay awooddooda.
Sida ku cad bayaankooda, gabadha ayaa la nikaaxin karaa iyadoo aan qaan gaarin, inkastoo markaas ka dib tixgelin la siinayo inay leedahay awood ku filan oo dhanka gogosha ah iyo in kale.
Mid ka mid ah daliillada ay war saxaafadeedka ku soo bandhigeen culumaa’udiinka, oo ku qotoma qodobkaas ayaa ahayd in Nabigeena Muxammad (NNKH) uu Caa’isha ku guursaday da’da 9 sano.
Iyadoo taas laga tix raacayo ayay hindise sharciyeedka ku tilmaameen mid xad gudub ku ah Rasuulkii Alle, maadaama uu ka soo horjeedo arrin uu isaga sameeyay.
Markii uu dhammaaday kulanka ay shalay magaalada Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah culumaa’udiinka Soomaaliyeed ayey war saxaafadeedkooda dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka uga codsadeen inay dib u eegaan hindise sharciyeedkaas, isla markaana ay ka saaraan qodobada xad gudubka ku ah shareecada islaamka iyo dhaqanka suubban.
Hay’adda Culumada Soomaaliyeed ayaa horey bayaan uga soo saaray sharcigan, waxayna sheegeen in sharciga wax dhimaal u yahay diinta Islaamka.